October 2021 - Page 16 of 20 - SonSon LinLin
အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်မှာတည်ငြိမ်နေပေမဲ့ အင်မတန်ဒေါသကြီးတတ်တဲ့ အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေအကြောင်း
အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့နေတတ်ကြပေမဲ့အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့နေ့နာမ်တွေဖြစ်ကြတယ်… မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ် လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ခင်မင်တတ်ပါတယ်… ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိ ရင်လည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန်တွေးပူနေတတ်ကြတယ် မိသားစုတွေအပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးချင်တဲ့စိတ်တွေရှိကြတယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေမဲ့တခါတလေမိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တတ်ကြတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူများအပေါ်ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ထင်မြင်တတ်ကြတာအင်္ဂါ… အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်…အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ်..သူများတွေမြှောက်ပေးရင်တော့သိပ်မကြိုက်ဘူး.. အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အပြုံးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင် လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့တတ်သလောက် […]
ညအိပ်မပျော်သူတွေအတွက် ဆယ်မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်စေမယ့်နည်းလမ်း အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူအများစုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါ။ အတွေးလွန်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်၊ အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် စသဖြင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပိုဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း လုံးဝမကာင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ညဘက်မှာ လွယ်လွယ်အိပ်ပျော်စေဖို့၊ ဆယ်မိနစ်အတွင်း အိပ်ပျော်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြေလျော့ထားပါ ၁၀ မိနစ်အတွင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ ပထမဆုံးအိပ်ရာပေါ်မှာပက်လက်လဲအိပ်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြေလျော့ထားပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောတွေကို ဖြေလျော့ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကဂွမ်းစလေးလို ပေါ့ပါးနေတယ်လို့ တွေးလိုက်ပါ။ […]
လမ်းဘေးတွင် တောင်းရမ်းစားသောက်နေရာမှ ဓာတ်ပုံဆရာ၏ အမှတ်မထင်ရိုက်ကူးမိလိုက်သော ဓာတ်ပုံကြောင့် နိုင်ငံကျော်လာခဲ့သည့် ချစ်စဖွယ်မိန်းကလေး
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသားတိုင်းသည် ကံကြမ္မာ၏ စေခိုင်းရာအတိုင်း ဘဝအမျိုးမျိုးတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်နေကြရသည်။အချို့လူသားတို့သည် အဆင့်မြင့်မြင်နေထိုင်နိုင်ကြပြီး အချို့သည်လည်း ဘဝကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေကြရသည်။ လူသားတိုင်းသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နှိမ်ချခြင်းမရှိဘဲ တန်းတူးဆက်ဆံပေးနိုင်လျှင် အလွန်သ ာယာသော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပေမည်။ ယခုတွင်လည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ မိန်းမပျိုလေးသည် လမ်းဘေးတွင် တောင်းစားနေရသူမှ န ာမည်ကျော်သည့် မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏မိသားစုသည် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာဖြင့် ဖြတ် သန်းနေကြရပြီး တစ်ရက်တွင် တစ်ပုံဆရာတစ်ဦး၏ သဘာဝအလှများကို ရိုက်ကူးရင်းမှ ကေ […]
အတွင်းခံဘောင်းဘီနှင့် ကျန်းမာရေး…! (ကျန်းမာရေးအတွက် မပေါ့ဆသင့်ပါ)
ကျန်းမာရေးဟုဆိုရာတွင် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသည်အလွန်ပင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပေသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ရန် အတွင်းခံအဝတ်အစားကို မကြာခဏ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမျိုးပွားအင်္ဂါတို့သည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိင်အင်္ဂါမှ အရည်များအမြဲတစေစိမ့်ထွက်လေ့ရှိပြီး ၎င်းအရည်တို့သည် အောက်ခံဘောင်းဘီကို စိုစွတ်စေပါသည်။ ၎င်းသည်ပင်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ညစ်ပတ်စေသော အဓိအကြောင်း အရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အတွင်းခံကိုမကြာခဏ မလဲလှယ်ဖြစ်ပါက ဘက်တီးရီးယားပိုးများ စုပုံလာနိုင်ပြီး ရောဂါ အလွယ်တကူဖြစ်ပွားနိုင်စေပါသည်။ သန့်ရှင်းမှု အတွင်းခံအဝတ်အစားကို မကြာခဏ လဲလှယ်သင့်သော အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုသည် […]
လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် ပါသူတွေရဲ့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ ထူးခြားချက်များ…
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ No Commentson လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး […]
သမီးနဲ့သားမက် ပေါင်းပြီးလမ်းဘေးတွင် စွန့်သွားခံရတဲ့ (၈၅) နှစ်အရွယ်အမေအို သနားစရာသတင်းပါ သမီးအရင်းနဲ့ သားမက်ကိုယ်တိုင် ကားဝင်းမှာ လာစွန့်ပစ်သွားတဲ့ အသက်(၈၅)နှစ် အဖွားအား မြဆည်းဆာမှ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်လိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပရဟိတ ကိုဇင်မိုးမှ အခုလို ” စွန့်ပစ်ခံ အဖွားနာမည်က – ဒေါ်ခင်ကြိုင်/အသက် – (၈၅)နှစ်/ဇာတိက ဝေါမြို့နယ် ဆတ်သွားကုန်းရွာကပါတဲ့ … သားသမီး (၅)ယောက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ စွန့်ပစ်တဲ့ သမီးက အကြီးဆုံးသမီးတဲ့ […]
မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ သူ့လက်တွဲဖော်နဲ့ ညှိမရနှိုင်းမရနဲ့ သဟဇာတမဖြစ်တော့ဆုံးလဲ သိလား …? ဥပေက္ခာတွေနဲ့ နေသားကျသွားတဲ့ အချိန်ပဲ . . .။ အချစ်ကို လိုနေချိန်မှာ အချစ်မခံရတဲ့ မိန်းမ၊ နွေးထွေးမှုကို တောင့်တနေချိန်မှာ အေးတိအေးစက် ဆက်ဆံခံရတဲ့မိန်းမ . . .၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ ကြင်နာတာတွေကို မျှော်လင့်နေချိန်မှာ လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းမ . . .၊ အဲ့လိုမိန်းမတွေ အေးစက်သွားတဲ့အခါ ယောက်ျားတွေ […]
သနပ္ခါး ႀကိဳက္တဲ့ မိန္းခေလး ေတြ သိထားသင့္တဲ့ ဗဟုသုတ ေလးပါ
မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ် ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ် ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါနောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့ဆီ+ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ် ။ ဆီခြောက်တော့မှသနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ် ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီးတနေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့ မေမေပြောပြတယ် ကျောက်ပျဉ် ပေါ်သနပ်ခါး သွေးတာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲမိမိခါးအလည်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးသွေးရမယ်တဲ့ […]
ဘဝမှာ အရမ်းကြီး ကြပ်တည်းပြီး ဒုက္ခရောက်နေရင် ဒီဂုဏ်တော်လေး ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်ပါ
ဘဝမှာ အရမ်းကြီး ကြပ်တည်းပြီး ဒုက္ခရောက်နေရင် ဒီဂုဏ်တော်လေး ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လိုက်ပါ မင်္ဂလာပါ ပရိတ်ကြီးရေ ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တို့အတွက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဘဝမှာ အ ရာရာတိုင်း အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရတာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး တစ်ခုကို မှိဝေပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တော့ မဟာသမယသုတ် ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာသမယသုတ် ပရိတ်တော်မြတ်ကြီးပဲ ကိုသာ ယုံကြည်လေးနက်စွာ ပူဇော် လိုက်ပါ။ […]